Daily Reflection | Page3| Radio Veritas Asia
For listening to this Content in Sagaw Karen: Please Click the Audio File Below
လ႕တႈဒိကနဥတႈဂ့ႈအံၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈကလုႈအိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးဒိကနဥအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ’
တႈကြႈထံဆိကမိဥလ႕နီႈခိဒီးနီႈသးဂီႈ မုႈသ႕နံၚ (လါမ့ၚ.၂၉သီ.၂၀၁၉)
ပွၚမၚစ႕ၚတႈလ႕ ဎကမ႕လီၚအီၚလ႕ဎပႈအအိဥယသးလ႕အဘဥဃးဒီးတႈမ့ႈတႈတီလ႕အဟဲလ႕ပႈအ အိဥန႔ဥဟဲ၀ဲဒီးကအုးအသးလ႕ယဎဂ့ႈဎက်ိၚလီၚ’
For viewing and listening to the Content of This Program: Please...
တႈကြႈထံဆိကမိႈ ဎိၚဟဥ ၁၅း၁၈”၂၁ လါမ့ၚ ၂၅ သီ ၂၀၁၉
Sometimes our plans and dreams may be very defferent from what God has planned for us. St Paul and his companions were filled with an ardent desire to preach the Gospel in Asia. But the Holy Spirit would not permit them and they listened and...
”လ႕လံဏတႈသးခုကစီဥအပူၚတနံၚအံၚခရံဏကိးက့ၚအပွဲႈအဘီဥသ့ဥတဖဥလ႕ အတံၚသကိးန႔ဥလီၚ’ ခရံဏတမ့ႈထဲပဏဖ်ါထီဥအတႈကဟုကဎဏတမံၚဧိၚဘဥဆူအပွဲႈအဘီဥသ့ဥအအိဥဘဥဒီးလ႕အ၀ဲသ့ဥ တႈအိဥဆူဥအိဥခ်႔တႈအိဥမုဏအိဥပ႕ၚတႈဘီဥတႈညီန႔ဥလီၚ’ခရံဏသူဥဖွံသးဖွံလ႕အရ႔တံၚရ့သကိးဒီးအ ပွဲႈအဘီဥသ့ဥတဖဥဒီးသးအိဥညီႏုႈ...
တႈကြႈထံဆိကမိဥလ႕နီႈခိဒီးနီႈသးဂီႈ မုႈလြံႈနံၚဂီႈ (လါမ့ၚ.၂၃သီ.၂၀၁၉)
တႈကြႈထံဆိကမိဥလ႕နီႈခိဒီးနီႈသးဂီႈ မုႈသ႕နံၚ (လါမ့ၚ.၂၂သီ.၂၀၁၉)
ဎဲဒဥအံၚဎမ့ႈစပံးမုႈနီႈနီႈဒီး ဎပႈမ့ႈ ပွၚပ႕ၚစပံးမုႈအလီႈလီၚ’ ဎဲဒဥအံၚ ဎမ့ႈစပံးမုႈယ သု၀ဲသ့ဥအံၚ သုမ့ႈအဒ့အဖီလီၚ’ပွၚလ႕အိးဆိးလ႕ဎပူၚန႔ဥယဎကအိဥဆိးလ႕အပူၚဒီး ကသဥထီဥအသဥအါမးလီၚ’ အဂ့ႈဒ္အံၚယမ့တမ့ႈလ႕ဎၚဘဥဒီး သုတမ့ႈတႈနီတမံၚဘဥ’